Ny lalao Android 27 tsara indrindra miaraka amin'ny mpanara-maso izay tsy azonao hadino | Androidsis
Ny lalao Android 27 tsara indrindra miaraka amin'ny mpanara-maso izay tsy azonao hadino
Miaraka amin'ny a lisitry ny lalao Android miaraka amin'ny mpanara-maso mba hahafahantsika mankafy azy ireo toy ny hoe miaraka amin'ny console anay izahay. Ny fanaraha-maso toy ny an'ny PS na Xbox dia mendrika antsika tanteraka amin'ireo tolona ireo.
Ary eo amin'izy ireo no ananantsika Fiara, fananganana ary koa simulator Street Fighter 2, ka ndao handeha haingana miaraka amin'ity lisitry ny lalao ity izay tsy azonao adinoina amin'ny fomba rehetra.
1 cellules maty
3 Link Steam
6 Antso an'ny Duty®: finday
7 GTA: Adin'ny Chinatown
11 Rantsanana eny amin'ny habakabaka 2
20 Ny lalan'ny fahafatesana any Canada
23 loha ambaratonga
25 Tompon-daka Street Fighter IV Edition
26 Mpiady farany
27 NVIDIA GeForce ETO
Ary mihazakazaha satria izany mandritra ny andro vitsivitsy amin'ny antsasaky ny vidiny iray amin'ireo roguelike tsara indrindra ary nahazo fanitarana karama vaovao izy io izay mitondra boss farany farany antsika, fitaovam-piadiana vaovao mahatalanjona ary ambaratonga maro hafa ho an'ny iray amin'ireo premium tsara indrindra amin'ny Android.
Y tsy ho sasatra midera ny asa vitan'ny mpamorona azy ho an'ny simulator tsara indrindra ireo toeram-piompiana ananantsika amin'ireo finday. Izy io dia aloa ary mitentina isaky ny cent cent hofehezina lavitra mihitsy aza mba hahamora ny zava-drehetra.
Developer: Voafetra ny Chucklefish
Amin'ny alàlan'ny Rohy Steam ho afaka hitaratra ireo lalao ananantsika amin'ny PC novidiana isika ato amin'ity magazay malaza be ity. Ny hany tokana izao dia ny fampifangaroana lavitra Bluetooth hahafahanao milalao ireny lalao ireny tsy misy olana.
iray hafa ny battle royale izay manohana ny mpanara-maso ny lalao mba handraisanao anjara feno amin'ny lalao royale ady ataon'izy ireo. Tsy ho azonao atao ny misintona azy io ao amin'ny Play Store, fa ho azonao atao ny misintona azy avy amin'ny tranokalan'ny Epic Games mandritra ny famahana ny adin'izy ireo.
Un lalao saika ilaina tokoa mba hankafizanao azy miaraka amin'ny mpanara-maso lalao ary izany no antony anohanany azy hankafizany ilay fikorontanan'ny jumps ary fahaizana tsy manam-paharoa an'ny maherifonay manohitra mpilalao hafa. Lalao mahery sy haingana izay tsy mandiso fanantenana.
Antso an'ny Duty®: finday
Tecent Games dia mbola manohy mampiseho hozatra ary navoaka ny COD finday amin'ny fomba tsara indrindra. Izy io dia manana fanohanana baiko mba hahafahanao maka ilay iray amin'ny PS4 na PS5 ary ho sahiran-tsaina amin'ireo mpilalao amin'ireo karazan-dalao isan-karazany hatramin'ny lalao royale anao manokana.
GTA: Adin'ny Chinatown
Rockstar Games dia nandefa an'i Chinatown Wars tany amin'ny Play Store ary mazava ho azy fa iray amin'ireo mari-pamantarana ho an'ny lalao finday (console) finday, dia namboarina mba hahafahanao milalao azy amin'ny fomba tsara indrindra miaraka amin'ny mpanara-maso. Ny zava-drehetra avy amin'ny Grand Theft Auto avy amin'ny fomba fijery top. Nandoa toy ny maro hafa amin'ity lisitra ity.
iray hafa kilalao premium izay mitondra an'io angano metroids angano io ary io no nitokana an'io. Lalao malala-tanana amin'ny singa rehetra ao aminy izay hampiverina fahatsiarovana tena tsara tamin'ny lasa. Manohana mpanera izy io mba hilalaovany kokoa.
Grimvalor dia lalao mihetsika lehibe miaraka amin'ny sary manintona ary amin'ny alàlan'ny fampiasana baiko dia hanome antsika hery bebe kokoa hahafahana mandroso tsara amin'ny alàlan'ny galeriany. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy mila mamaky ilay boaty ianao satria lalao maimaim-poana izany.
Ary raha manohy manantena izahay fa indray andro any dia ho tonga amin'ny Android ny ampahany faharoa, satria misy amin'ny iOS izy io, i Oceanhorn dia iray amin'ireo RPGs vita tsara indrindra ary izany dia miaraka amina bokotra fanaraha-maso no lalaovina tsaratsara kokoa. Maimaimpoana ho an'ny fahafinaretan'ny maro.
Lalao hetsika hafa amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny tolona futuristic izay mandeha somary eo am-pelatanan'ny lalao karazana Cyberpunk, na dia misy fomba fijery isometrika aza. Tonga tamin'ny taona lasa izay, fa ilay iray izay azontsika lalaovina maimaim-poana sy miaraka amin'ny bokotra fanaraha-maso, mahatonga azy ho mendrika an'ity lisitry ny lalao ity.
Uno amin'ireo ARPG goavambe ananantsika amin'ny Android misokatra ary lalao kilalao io. Ny sarintany dia novokarina an-tsokosoko ka raha te hanao izany dia tsy mitsahatra mitrandraka izahay. Lalao atypical izay mamela anao hamorona asa-tanana sy tarehy entina amin'ny planeta hafa.
Crashlands: Crafting ARPG tantanin'ny tantara
Developer: Shenanigans Butterscotch
Playdigious dia amin'ny endriny tsara ary asehony indray miaraka amin'i Teslagrad; miandry ahy hamoaka vatosoa iray hafa amin'ny Android atsy ho atsy. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia mifampiraharaha amin'ny Tesla malaza amin'ny lalao izay miaraka amin'ny mpanara-maso dia manatsara tokoa ny traikefa lalao amin'ny tselatra sy ny fizika.
Una ny lalao traikefa nahafinaritra nahavita be indrindra ary izany mitondra antsika amin'ny sambo izay tsikelikely dia tsy maintsy ahitantsika ny antony, ireo izay mpiara-dia taminy taloha, dia navadika ho zombie te-handray ny aintsika.
Faharetana: virus ao amin'ny habakabaka (lalao pixel art rpg)
iray hafa manontany tena amin'ireo lampihazo ary izany dia mitarika antsika hahatsapa ny atao hoe Viking. Mamela antsika hilalao lalao maimaim-poana mba hahafahantsika mamakivaky ny maso ary mivoaka avy eo an-jorony ny stifle rehefa fantatsika fa miatrika sehatra lehibe isika. Avy eo tsy maintsy mandoa vola ianao, fa manome baiko ho an'ny komandy….
iray hafa amin'ireo sehatra mahazatra mahazatra ananantsika amin'ny finday ary izany miaraka amin'ny fikitihana sary iray loko dia afaka nanangona maro. Tsy maimaim-poana izany, fa raha mitandrina amin'ny tolotra amin'ny fahavaratra sy krismasy isika dia afaka mahazo azy io maimaim-poana. Fihetseham-po mahatsiravina izay hanampiana anao betsaka ny baiko.
Thomas Young Platformer, A indie developer izay mahita ny toerany amin'ny lalao finday ary izany dia mitondra antsika amin'ny fifehezana akoho milay be. Haavo samihafa sy foto-kevitra tena aingam-panahy avy amin'ny lalao Mario ho an'ny findainao Android maimaim-poana.
Developer: Thomas k tanora
Ary ahoana raha Izy Hita ihany koa ny lalao akoho amin'ny fiampitana arabe sy ny arabe miaraka amin'ny lavitra mba hahafahanao mankafy azy tsara kokoa. Lalao efa nalaza ary mbola eo am-baravarana tsara izany ka raha manana mpanamory miaraka ianao dia azonao atao ny milalao azy io manomboka izao amin'ny findainao.
Developer: VAROTRA HIPSTER
Playdigious indray miaraka amin'ny RPG izay milalao miaraka amin'ny fampiraisana ny lalao milalao andraikitra isan-karazany amin'ny vanim-potoana samihafa avy amin'ny foto-kevitry ny sary. Izany hoe handeha hiala amin'ny filalaovana ny taona 90 ianao, mankany amin'ny iray hafa ankehitriny. Manome fanohanana fanaraha-maso baiko.
Ny lalan'ny fahafatesana any Canada
Un kilalao premium avy amin'ny Noodlecake Studios izay misaotra ny fahaizany lehibe hiteraka lalao kisendrasendra izay tsy niarahan'ny dinika sy ny tantara niova ho samy hafa mihitsy, nahatonga azy io ho iray amin'ireo lalao sarimihetsika tsara indrindra ananantsika amin'ny finday. Oh, ary hanana zombie an-jatony eo amin'ny efijery ianao.
El lalao fanaingoana fiara tsara indrindra ankehitriny ary satria tsy premium izany. Voaloa ny soa. Manana safidy hankafizana multiplayer sy izay hitanao amin'izany izahay lisitry ny lalao Android tsara indrindra hilalaovana miaraka amin'ny namana amin'ny Internet. Ho tsapanao ny zava-misy amin'ny familiana fiara fifaninanana avo lenta amin'ny findainao.
Lalao hazakaza-fiara hafa fa amin'ity indray mitoraka ity toy ny hoe angano Out Run ny milina arcade. Raha te-hahatsapa fihetseham-po mitovy amin'izany ianao ary miaraka amina bokotra fanaraha-maso handry eo amin'ny sezalà ary apetraho eo amin'ny latabatra ilay takelaka dia mankanesa ao.
Developer: Lalao Aquiris Studio SA
Avy amin'ireo mpamorona ny Crashlands no niavian'izy ireo vaovao sehatra sehatra premium miavaka amin'ny mpamorona haavony hahafahantsika mizara azy ireo ary manohitra ny mpiara-miasa sy namana. Lalao miaraka amin'ny mpanara-maso izay avo lenta amin'ny haitao sy teknika ary tokony andoavanao vola.
Un filalaovana andraikitra sy lalao fiaraha-miasa izay miaraka amina mpanara-maso anao dia hanana fotoana mahafinaritra amin'ny adin'izy ireo amin'ny lozisialy farany. Safidio ny iray amin'ireo kilasy toy ny mpanao majia na ilay mpiady amin'ny RPG izay mitentina 5,49 euro hahafahana mankafy traikefa feno tsy misy doka.
Developer: Lalao 505 Srl
Tompon-daka Street Fighter IV Edition
Ary mamarana ity andiany ity izahay lalao miaraka amina fanaraha-maso miaraka amina vitsivitsy hanomezana kapoka tsara. Street Fighter IV dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny lisitra hankafizan'i Ken sy Ryu sy ireo mpanohitra ireo. Ianaro ny fahaizan'i Chun-Li ao anaty arcade iray manontolo izay amin'ny fifehezana dia hahatsapa ho ambony noho izany aza.
Ary misy maro ireo milaza fa io no lalao miady amin'ny fomba fijery tsara indrindra manana amin'ny Android isika. Anjaranao izao ny manombana izany ary manapa-kevitra raha io no tsara indrindra. Maromaro ny manahirana azy, saingy mampiasa sary tsara, mpiady isan-karazany ary ireo vokany izay mamadika ny lalao ho frenzy madio.
NVIDIA GeForce ETO
Y Nahavita an'ity lisitra ity izahay tamin'ny alàlan'ny sehatra streaming streaming tahaka ny an'ny NVIDIA ao amin'ny Netflix. Miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra miaraka amin'ny findainao Bluetooth, azonao atao ny mankafy lalao maimaimpoana sy vidiana amin'ny magazay an-tserasera toa ny Epic Games, Steam na GOG.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao Android 27 tsara indrindra miaraka amin'ny mpanara-maso izay tsy azonao hadino
Ny lalao Android 39 tsara indrindra hilalaovana amin'ny namana amin'ny Internet